Sidee loo qaabeeyaa isku xirka Wifi ee Raspberry Pi adiga oo aan shidin guddiga | Qalabka bilaashka ah
Sida loo qaabeeyo isku xidhka Raspberry Pi Wifi adigoon shidanayn sabuuradda
Sannad-dugsiyeedka cusubi wuu bilaabmay waana hubaal, in badan oo idinka mid ahi waxay ku bilaabaan Raspberry Pi gacantaada hoosteeda ama buugaagta cusub. Maanta waxaan kuu sheegaynaa xeelad yar oo lagu dedejinayo bootka ugu horreeya ee Raspberry Pi iyo diyaarso iskuxirka Wi-Fi ee guddiga adigoon galin xog cusub, furaha sirta ah, iwm.
Tan waxaan kaliya ugu baahanahay kombiyuutar Windows ama Linux ah, kaarka microsd, isku xirka Wi-Fi iyo loox Raspberry Pi 3. Alaabada aan dhamaanteen gacanta ku heyno ama aan yeelan doono ama si fudud ku heli karno.
Mar alla markii aan waxaas oo dhan helno. Waxaan ku soo bandhigeynaa kaarka microsd-ka Windows pc iyo waxaan ku keydinaa sawirka Raspbian-ka kaarka microSD. Waxaan ku qaban karnaa barnaamijyada sida Etcher, taas oo aan loo heli karin oo keliya Windows laakiin sidoo kale Ubuntu iyo macOS.
Mar alla markii aan duubno sawirka Raspbian-ka, kaarka ayaan ka saarnaa oo waxaan dib ugu celinnaa Windows-ka, innagoo tusayna dhammaan faylasha lagu duubay kaarka microSD. Gudaha / boot bootka waa inaan ku darnaa laba faylal: SSH iyo wpa_supplicant.conf.
Faylka ugu horeeya waa in la abuuraa maran mana ahan inuu lahaado kordhin. Haddii Windows uu ku daro kordhinta .txt, waa inaan tirtirno. Ku saabsan feylka wpa_supplicant.conf, tan waxaan ku abuuri karnaa Notepad waana inay ku jirtaa qoraalka soo socda:
Meelaha loogu talagalay SSID iyo PSK waa inaan ku darnaa magaca shabakadda ama router iyo lambarka sirta ee router. Waan keydineynaa macluumaadkan waxaanan heysanaa kaarka microsd-ka Raspbian-ka oo diyaar ah. Hadda waa inaan kaarka galiyaa Raspberry Pi-ka isla markaana software-ka wuxuu si otomaatig ah ugu xirayaa guddiga Raspberry Pi xirirkayaga Wifi, taasoo sahleysa cusbooneysiinta iyo rakibidda barnaamijyada aan u baahannahay.
Xigasho - Raspberry for sirgaxan
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Raspberry Pi » Sida loo qaabeeyo isku xidhka Raspberry Pi Wifi adigoon shidanayn sabuuradda